Khabiirka Kala Duwan: Tirakoobka Websiteka Hack iyo Weerarkiisa
Warbixinnada waxay muujiyeen in kuwa jinsiyadaha ajnabiga ah ay ka dambeeyeen tirakoobkii Australiya. TheXafiiska Tirakoobka ee Australia wuxuu bilaabay dadaalka inuu xiro nidaamka si uu u ilaaliyo daacadnimada xogta. Baaritaan dheeraad ah,Xafiisku wuxuu sheegay in qaabka tirakoobka online uu yahay dhibbanaha afar loo qaybiyay weerarada DDoS, mid kasta oo dabeecad gaar ah leh iyo darnaanta kala duwan - software logo design kostenlos.
Nik Chaykovskiy, Maareeyaha Guusha Guud ee Macaamiisha Sare ,sharraxayaa sababta arrimahan oo kale u dhacaan.
Weerarku wuxuu isku dayayaa in uu abuuro goob aan ku jirin dadka isticmaala iyada oo daadad badan lehcodsiyada ka badan inta ay qaban karto. Codsiyada websaydhka ee xogta waxay u gudbayaan server-yada oo ansixinaya oo u oggolaanaya qofka inuu arko bogga.Si kastaba ha noqotee, waxa kaliya oo ay wax ka qaban kartaa tiro codsi oo gaar ah. Xadidaadu waxay keeni kartaa in ay dhamaystirto guul darrida sirta, samaynta goobtasi ku meel gaar ah looma heli karo. Weerarrada DDoS waxay ku tiirsan yihiin dhowr qalab oo ku baahsan adduunka oo dhan, markaa magaca "loo qaybiyey". Kooxahaqalab isku xiran ayaa loo yaqaan "botnets" mid kasta oo qaba infekshanka khatarta ah ee siinaya khadadka casriga oo soo galaya goobta iyagoo isticmaalaya meel fog.
Sababaha loo adeegsado DDoS
Hackers waxay isticmaali karaan weerarada DDoS sababo kala duwan. Waxaa ka mid ah:
Hacktivism Xag-jirayaasha waxay adeegsadaan weerarrada noocaas ah si ay uga hor tagaan falalka qaar iyaga oo bartilmaameed u ah..
Kufsi Dambiilayaasha Cyber ​​waxaa loo yaqaanaa inay isticmaalaan habkan si ay lacag ugu helaanbeddelidda joojinta weerarrada socda
Ganacsiga Ganacsiga DDoS ma noqon karto mid ganacsi oo sharci ah, laakiin waamararka qaarkood waxay u isticmaaleen inay hoos u dhigaan ama joojiyaan waxqabadka shabakada tartanka.
Waraaqda Kiddies Qaar ka mid ah dadka isticmaala internetka waxay isticmaalaan qoraallo horay loo soo diyaariyay si ay u waxyeeleeyaan internetkadhaqdhaqaaqyada kale sida cayaaraha
Maxay Khasaaradu Ka Gaadhsantahay Tirakoobka DDoS?
Ugu horreyntii, waa inaan fahamnaa in khaniisiinta ay tahay inay ogaadaan suurtogalnimadadayac tirka goobaha tirakoobka. Waxay u badan tahay sababtoo ah gaadiidka culus ee la filayay. Sidaas awgeed, goobta ayaa sii kordheysabartilmaameedka loogu talagalay khabiirada dibadda si ay u muujiyaan sida nidaamka dawlada Australia ujeeda inay u weeraraan. Waxay sidoo kale noqon kartaa jawaabta korodhkafaallooyinka dadweynaha ee ku saabsan ammaanka iyo asturnaanta asturnaanta. Andy Hurren waxa kale oo uu lahaa dareeno isku mid ah, oo rumaysan in dhibtii la sameeyayku guul daraysiga in la ilaaliyo nidaamka internetka ee heer qaran oo heer qaran ah. Si kastaba ha noqotee, sababaha dhiirrigelinta weerarada uma badna inay noqdaan lacag ama xog, si kastaba ha ahaatee.Sababaha kale ee suurtogalka ah ayaa ah kuwo aan ciriiri lahayn khayaanada dibada ee aan ku raacsanayn nidaamka ama qofkii raba inuu soo bandhigo xirfadahooda jilayaasha.
Macluumaad Amaan ah
weerarka DDoS wuxuu inta badan diirada saaraa isku daygeeda ku saabsan burburinta goobta. Maaha mid beegsanxogta ku jirta goobta. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah kuwa weerarka qaaday ayaa laga yaabaa inay isticmaalaan weerarka DDoS inay u dhaqmaan sida leexashada, taas oo ay ka dibna u ducayn karaanxogta macmiilka ee shabakada sida kiiska ee shirkadda Telecom ee TalkTalk.
ABS waxay si adag u aaminsan tahay in sababta ugu weyn ee shilalka goobta tirakoobku uu yahay weerarka DDoS.Waxaa jiri kara sababo badan, laakiin maadaama ay ABS ku leedahay macluumaad badan oo ogaan lahaa waxa raadinaya marka la go'aaminayo ilaha, iyo baaxadadhaawaca. MUDANE. Hurren, oo ah khabiir ammaan ah oo khadka internetka ah ayaa sharxay wadahadalka ka dhexeeya Agaasimaha Warfaafinta Australiya iyo khuseysadaneeyeyaashu waxay horeba u qaabeeyaan qaab. Way fududahay in la raadsado ilaha weerarka, laakiin dhibka weerarku wuu ka dhigi karaaFarta-tilmaamid aad u adag.